IiNdumiso Chapter31 1 Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndizimela ngawe, Yehova, mandingaze ndidaniswe; Ndisize ngobulungisa bakho. 2 Ndithobele indlebe yakho, ungxame undihlangule; Yiba liliwa eliligwiba kum, Indlu yemboniselo yokundisindisa. 3 Ngokuba ingxondorha yam nemboniselo yam nguwe; Ngenxa yegama lakho uya kundikhapha undithundeze. 4 Uya kundirhola esibatheni ababesigqumele mna, Ngokuba uyinqaba yam. 5 Ndiwuyaleza umoya wam esandleni sakho; Uyandikhulula, Yehova, Thixo wenyaniso. 6 Ndibathiyile abagcine amampunge angento yanto. Ndikholose ngoYehova mna. 7 Ndiya kugcoba ndivuye ngenceba yakho, Ngenxa enokuba uzibonile iintsizi zam, Wazazi iingxingongo zomphefumlo wam; 8 Akwandivingcela ngesandla seentshaba, Wazimisa endaweni ebanzi iinyawo zam. 9 Ndibabale, Yehova, ngokuba ndibandezelekile; Lonakele kukukhathazeka iliso lam, nomphefumlo wam, nesisu sam; 10 Ngokuba buphelile sisingqala ubomi bam, Neminyaka yam kukuncwina; Ayagexa amandla am ngobugwenxa bam, Namathambo am aluphele. 11 Ngenxa yababandezeli bam bonke ndaba sisingcikivo, Ngokukodwa kubamelwane bam; ndaba yinto yokunkwantyisa kwabandaziyo; Abandibonayo ngaphandle baya ndibaleka. 12 Ndilityelwe njengomfi ongasakhunjulwayo; Ndinjengesitya esiza kulahlwa. 13 Ngokuba ndive intlebendwane yabaninzi, Ukunxunguphala ngeenxa zonke. Ekugquguleni kwabo ngam, Bankqangiyela ukuthabatha umphefumlo wam. 14 Ke mna ndikholose ngawe, Yehova; Ndithi, UnguThixo wam wena. 15 Asesandleni sakho amaxesha am; Ndihlangule esandleni seentshaba zam nakwabandisukelayo. 16 Khanyisa ubuso bakho phezu komkhonzi wakho; Ndisindise ngenceba yakho. 17 Yehova, andiyi kudana, ngokuba ndinqula wena; Makudane abangendawo, bathi cwaka kwelabafileyo. 18 Mawubotshwe umlomo wobuxoki, Othetha ngelungisa ngokusa, Unekratshi, udela. 19 Hayi, ubukhulu bokulunga kwakho, obuqwebele abakoyikayo, Obenzela abazimela ngawe, ebusweni boonyana babantu! 20 Ubasithelisa esitheni lobuso bakho kumayelenqe abantu; Uyabagusha emnqubeni ekubambaneni kweelwimi. 21 Makabongwe uYehova, Ngokuba endenzele inceba ebalulekileyo emzini onqabileyo. 22 Ke mna ndathi ekuphakuzeleni kwam, Ndinqanyulwe andabakho emehlweni akho. Waliva noko izwi lokukhunga kwam ekuzibikeni kwam kuwe. 23 Thandani uYehova, nonke nina bakhe benceba; NguYehova umlondolozi wabanyanisileyo, Umphindezeli ngokukhulu kowenza ngekratshi. 24 Yomelelani, ikhaliphe intliziyo yenu Nonke nina nithembele kuYehova. [ Prev ]